LANDON ထမင်းစားခန်းတစ်လုံးကိုတစ်အိုး - နှုန်းထားများ
မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိသူတို့၏စားသောက်ခန်းမ ၁၁ လုံးသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောကျောင်းသားများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်သေချာအောင်ကြိုးစားသည်။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ထမင်းစားခန်းအားလုံးကိုတန်းတူဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူး။ အသင့်အတင့်သာယာ။ အရသာရှိသောရွေးချယ်စရာများအများစုကိုမြောက်ပိုင်းရှိ Landon ခန်းမအတွင်းရှိကဖီးသည်အကောင်းဆုံးအစားအစာများကိုပေးသည်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ကြက်နှင့် pita ပေါင်မုန့်
အသုတ်ဘားနှင့်အလယ်အပိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည့် Landons ၏ကြက်သား (# ၂ ကိုကြည့်ပါ) ။ ၎င်းသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းစွာနံ့သာမျိုးနှင့်အတူရာသီအလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိကြက်သားရှာဖွေမှုအများဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအိမ်တွင်သင်တွေ့နိုင်သောကြက်သားကောင်းနှင့်တူသည်။
အဘယ်ကြောင့် rory ယေးလ်ထဲက drop ခဲ့တာလဲ
ပြီးတော့ငါ့ကိုကြက်သားဘေးမှာတွေ့နိုင်တဲ့ pita မုန့်အကြောင်းကိုတောင်မစတင်ပါနဲ့။ ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင် pita ဟာလက်ကား ၀ ယ်တဲ့အိတ်တစ်လုံးကနေလာတာဖြစ်ပေမယ့်ကြက်ကကြက်နဲ့တူတူပါပဲ။ သင်သည်သင်၏ပန်းကန်ပေါ်တွင်အအေးဖြစ်ပြီးသူတို့ကမ်းလှမ်းသော humus သည်စုံလင်သောတွဲဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တ ဦး တည်း gulp အတွက်ဘီယာသောက်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
ငါ # 1 မှာပြောခဲ့သကဲ့သို့, သုပ်ဘားဗုံးသည်! ထိုနေ့၏အသုပ်များသည်မတူညီသောဆလတ်နှင့်ထိပ်ဖျားအမျိုးအစားများသာမကအ ၀ တ်အထည်များသည်အမြဲတမ်းအရသာရှိပြီးကျန်းမာပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာကတော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ လတ်ဆတ်သောရေခဲစုပ်ဆလတ်နှင့် crispy ဟင်းနုနွယ်ရွက်၏ nice တုံး။ သင့်ရဲ့ပန်းကန်ကိုထိပ်ဆုံးမှသူတို့ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များခင်းကျင်းအဖြစ်ကောင်းစွာစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်း၊ ပြောင်းဖူးဆဲလ်ဆာ၊ crunchy croutons၊ နေကြာမျိုးစေ့များနှင့်ပဲစေ့တို့သည်အမည်ရှိစုံတွဲတစ်တွဲသာဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်မွေးမြူရေးခြံနှင့်အီတလီအဝတ်အစားများသည်အမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာများဖြစ်သော်လည်း Raspberry vinaigrette နှင့် Thai Zing တို့ကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းဤနေရာတွင်အဓိကကျသည်။
ဒီနေ့အတွက် Spartan App မှာရှိတဲ့ menu ကိုကြည့်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ခံတွင်းကိုရေထုတ်ပေးသည်။ နေ့လည်စာအတွက် Sizzle ဘူတာတွင်ကြက်သားကင်နှင့်ထောပတ်သီးသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ ကြက်သွန်ပွင့်ချပ်နှင့်sautéedဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောစပ်မှုများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အဆိုပါ bistro လိုင်းမှာညစာလည်းအလွန်ကြီးစွာသောအသံ။ နို့မှုန့်ကြက်သား၊ ဝက်သားနံရိုးနဲ့ပြောင်းဖူးပေါင်မုန့်တို့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်ကာမွှေနှောက်ကာအကြာကြီးနာရီဝက်ခန့်ကြာအောင်ထားလေ့ရှိသည်။ ထို့ပဲဒီနေ့ရဲ့အစားအစာပါ! ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တွေထည့်ပြီးမီးဖိုချောင်ထဲကperfectlyုံချက်ပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားတုံးတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။
ဘယ်လို vyvanse သင်ခံစားမိစေပါဘူး
ကျောင်းသားပေါင်း ၁၃၀၀၀ ခန့်သည်ကျောင်းဝင်းရှိလူနေအိမ်ခန်းမများတွင်နေထိုင်ကြပြီးအများစုမှာပထမတန်းကျောင်းသားများသို့မဟုတ်ဒုတိယတန်းစားကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ အခြား MSU ကျောင်းသားများသည်ကော်ဖီဆိုင်များတွင်မစားနိုင်ဟုမပြောသင့်ပါ၊ သို့သော်သင်သည် underclassmen များကို ပို၍ တွေ့နိုင်သည်။ Landon သည်ကျောင်းဝင်းရှိထမင်းစားခန်းများထဲမှမည်သည့်နေရာမှမဆိုကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မည်သည့်ခန်းမတွင်မဆိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောကျန်းမာရေးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ပီဇာနှင့်အချို့သောဒိန်ခဲပေါင်မုန့်များကသင့်ကိုငေးကြည့်နေလိမ့်မည်။ Landon တွင်ပီဇာသို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်များမရှိပါ (၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်) သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ကျောင်းသားသစ်များကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည် 15 ။
Landon ဟာအေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုရှိတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့်အဆောက်အ ဦး သည်အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုကိုက်ချင်သည့်အခါသို့မဟုတ်သင်ကော်ဖီသောက်ရန်နှင့်သင်ရေးရန်လိုသောစာရွက်ကိုကော်ဖီသောက်ရန်ခဏတာကိုရှာရန်လူ ၁၀ ယောက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်စားပွဲကြီးများရှိသည်။ ဘယ်နေရာမှာပဲထိုင်နေပါစေသင့်ရှေ့မှောက်မှာသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ထိုင်ခုံနဲ့ကောင်းတဲ့အစားအစာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
သငျသညျမြောက်အမေရိကတှငျနထေိုငျသောသူတို့အားကံကောင်းသူမြား၏အချို့လျှင်သင်, ကြီးစွာသောထမင်းစားခန်းခန်းမနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပဲ။ သင်သည်ငါကဲ့သို့သောသူနှင့်တောင်ဘက်တွင်နေလျှင် (သို့) အရှေ့၌နေရာချခံရသူများ (မင်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်းများ) ဖြစ်လျှင်သင်၏နှင်းရှူးဖိနပ်များနှင့်ပန်းခြံများပေါ်တွင်ပစ်ချပြီး Landon မှစားသောအစားအစာများကိုအနောက်ဘက်သို့စီးနင်းလိုက်ပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်။